Properties for Sale in Yankin - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
( 1400 sqft ), 2MBR, 1BR, ပါကေးခငျး, အဆငျ့မွငျ့ပွငျဆငျ...
Ad Number S-8104001
ကြယ်စင်လင်း (အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) Close
( 1600 sqft ), 1MBR, 3BR, A/C, ကြောကျပွားခငျး, ပွငျဆငျပွီး.... မိုးကောငျး...
Ad Number S-8103885
House for Rent at Bout htaw
House for Rent at Bout htaw House size - 70' x 80' Structure - 2RC, (4)...
Ad Number S-8102264
(1700sqft)အကယျြ၊ ရနျကငျး၊ စိမျးလဲ့မရေိပျသာကှနျဒို၊ ကှနျဒိုတိုကျသဈ အမွနျရောငျးရနျရှိ
တညျနရော - စိမျးလဲ့မရေိပ...
Ad Number S-8100372
ရန်ကင်းမြို့နယ် GRC Condo ပြင်ဆင်ထားပြီး အမြန်ရောင်းမည် 09408881957
Ad Number S-8094917
T-Home Real Estate Close
မဉ္ဇူလမ်းသွယ်​၊ ပါရမီ၊ ရန်​ကင်း၊ 40'x60'၊ ​မြေ၊ ဘိုးဘွား။ ​ရောင်းရန်​ရှိပါသည်​။
ရန်​ကင်းမြို့နယ်​၊ ပါရမီ၊ မဉ္ဇူလမ်းသွယ်​၊တွင်​ရှိပါသည်​။ ​ပေအကျယ်​ 40'x60'၊...
4,300 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8093048
Ad Number S-8092369
2,080 Lakh (Kyats)
Ad Number S-8092284
Ad Number S-8105108
Ad Number S-8105010
Ad Number S-8104867
Ad Number S-8104192
Ad Number S-8104040
Ad Number S-8103936
စကားဝါကွန်ဒိုတွင် (1600sqft) အကျယ်ရှိအခန်းအမြန်ရောင်းမည်။
Ad Number S-8103777
Ad Number S-8103578